Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham oo la kulmay OYSU London.
Maamulka Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham oo la kulmay OYSU London.
Ururka OYSU London ayaa maanta hawl shaqo ku tagay gobolka Midlandka gaar ahaan Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham halkaas oo ay kula kulmeen maamulka jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham iyo xubno kamid ah jaaliyada Birmingham.
Kulankan ayaa waxaa furay gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham Mudane Jacfar oo si diiran usoo dhaweeyay waftiga maamulka dhalinta OYSU London. Gudomiyaha ayaa furitaanki ka dib shirka kawaramay xaalada guud ee halganka shacabka somalida Ogadeniya gaar ahaan waxuu warbixin waafi ah ka bixiyay wacyiga bulshada somalida Ogadeniya ee ku nool magaalada Birmingham.
Sidoo kale Halgame Bashiir, Gudomiye ku xigeenka Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Birmingham ayaa isna ka warbixiyay xaalada dhalinyarada somalida Ogadeniya ee ku nool magaalada Birmingham iyo qorsheyaal abaabul oo jaaliyadu ka wado magaladaas oo la xidhiidha dhalinyarada.
Waftiga OYSU London ee booqashada ku tagay magaalada London ayaa waxaa hoggaaminaysay Marwo Bishaaro, Hoggaanka Abaabulka OYSU London. Marwo Bishaaro ayaa u mahad naqday Jaaliyada Ogadeniye ee Birmingham iyo sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen iyada oo aad u amaantay shaqada quruxda badan ee jaaliyadu ka wado gobolka Midhlaanka, sidoo kale Marwo Bishaaro ayaa Jaaliyada ugu hanbalyeysay xubin cusub oo kusoo biiray Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham xubinkaas oo ah Ilmo u dhashay gudomiyaha Jaaliyada. Marwo Bishaaro ayaa kusoo dhaweysay Xaliimo gobaad si ay uga hadasho qorsheyaal ay damacsanyihiin in Ururka OYSU London ka fuliyaan wadanka UK.
Xaliimo Gobaad oo kamid aheyd waftiga OYSU London ayaa soo bandhigtay Qorsheyaal ay jaaliyada Ogadeniya ee Magaalada Birmingham aad ugu diirsadeen. Qorshayaashaas oo jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham iyo Ururka OYSU London iska kaashan doonaan. Qorsheyaashan laga wada hadlay waxaa kamid ahaa
Ururka OYSU London oo ka hadli doona maflax weyn oo ku yaala magaalada London bishan gudaheeda. iyaga oo ka qeybin doona warbixino xasaasi ah oo loogu talo galay in lagaadhsiiyo haayadaha dowliga ah iyo kuwa bulsho ee wadanka UK.
Sidoo kale Xaliimo Gobaad ayaa ka warantay Qorshe Jaaliyada Ogadeniya ee Birmingham iyo Ururka OYSU London kawada shaqeyn doonaan Bishan gudaheeda. Qorshahaas oo aad loo jeex jeexay ayaa ugu danbeynti waxaa lakala qaatay qorsheyaashi lagu howl gali lahaa. Barnaamijkan ayaa la shaacin doona maalmaha fooda innagusoo haya.
Wufuuda OYSU London ayaa lafilaya in maalmo ay sii joogi doonaan gobolka Midhlaaanka.